Filtrer les éléments par date : mardi, 08 janvier 2019
mardi, 08 janvier 2019 14:49
Ambohidahy: Migadona i Andry Rajoelina mivady
mardi, 08 janvier 2019 14:48
Ambohidahy: Efa tonga ny Filohan'ny Andrim-panjakana Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona
Ambohidahy: Efa tonga ny Filohan'ny Andrim-panjakana Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona ary ny mpikambana ao amin'ny governemanta.
mardi, 08 janvier 2019 13:56
Ambohidahy La HCC est fin prête pour la proclamation
mardi, 08 janvier 2019 13:20
Mandritsara: Ombivavy sambany vao niteraka, namoaka omby sampona
Nitangorona ny olona teto an-drenivohitr’i Mandritsara, Faritra Sofia, androany raha nahita ity tranga ity. Veterinera no nantsoina nampiteraka ilay ombivavy rehefa hitan’ny tompony fa nanao sarotra.
Teraka ihany androany tokony ho tamin’ny 10 ora maraina. Omby sampona anefa no nivoaka tao, toy ny omby ny tapany ambany fa toa ireny alika vahiny avo karazana ireny kosa ny lohany.
Vao teraka moa ilay zanak’omby dia maty, salama kosa ny reniny.
Sambany niteraka ilay ombivavy hoy ny tompony.
mardi, 08 janvier 2019 13:13
Circulation: Route coupée tout autour de la HCC Ambohidahy
La préfecture d'Antananarivo a pris une disposition d'interdire toute circulation autour d'Ambohidahy, le temps de la proclamation du résultat de l'élection présidentielle cet après-midi. Seuls les invités et les journalistes pourront y accéder.
mardi, 08 janvier 2019 12:52
Fifamoivoizana: Tapaka avokoa ny lalana manodidina ny HCC Ambohidahy
Araka ny Didim-pitondrana navoakan’ny prefen’Antananarivo dia tapaka avokoa ireo lalana manodidina ny HCC Ambohidahy, na ny miditra sy mivoaka ny « tunnel » avy Andohan’Analakely sy Ambohidahy, na ny avy any Antaninarenina, manomboka amin’ny 1ora ka mandram-pahavita ny lanonana ara-pitsarana amoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) voka-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa anio tolakandro.
Ireo nahazo fanasana ihany no hahazo hampiasa ireo lalana miazo ny HCC Ambohidahy.
mardi, 08 janvier 2019 12:44
Ambodin’Isotry: « Cash Point » iray notafihin’ny jiolahy mitam-basy
Lasan’ireo olon-dratsy ny vola 1.600.000 Ariary sy finday lafo vidy maromaro, tao amin’ilay toerana fakana sy fandefasana vola amin’ny finday Ambodin’Isotry-Antananarivo androany maraina.
Nanapoaka basy in-telo ireo jiolahy saingy tsy nipoaka ny basy, nieren-doza ilay mpiandraikitra ilay « Cash Point ».
Tonga teny an-toerana ny Polisy. Efa dila ireo jiolahy. Bala efatra no hita teo amin’ny toerana nisian’ny fanafihana. Voalaza fa bala ratsy no nampiasain’ireo jiolahy ka izay no tsy nampipoaka azy.
mardi, 08 janvier 2019 12:39
Amparibe: Tsy hianatra ireo sekoly katolika eny an-toerana anio tolakandro
Nisy ny fampilazana taorian’ny fanapahan-kevitry ny mpitantana ny sekoly Saint Michel sy La Providence Amparibe-Antananarivo, fa tsy hisy fianarana anio talata tolakandro.
Misy ifandraisany amin’ny famoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) voka-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no voalaza fa antony, eo koa ny filaminana.
Tsy azo handehanana rahateo ireo lalana manodidina ny lapam-panjakana HCC eo Ambohidahy.
mardi, 08 janvier 2019 12:37
Lalam-pirenena faha-6: Tapaka eo Marivorahona (PK 588 + 500)
Dibo-drano ny lalana aty Marivorahona amin’ny lalam-pirenena faha-6, mampitohy an’Ambilobe sy Antsiranana, noho ny rotsak’orana be loatra tety an-toerana ny faran’iny herinandro iny. "Transbordement" no nampitana ny olona sy entana na hiakatra na hiazo an'Antsiranana noho io fahatapahan'ny lalana io.
Efa am-perinasa ankehitriny ireo tekinisian’ny Minisiteran’ny Asa Vaventy sy ny Fotodrafitrasa hamerenana amin’ny laoniny ny fifamoivoizana ety an-toerana.
mardi, 08 janvier 2019 11:46
Fifidianana filoham-pirenena : Hamoaka valim-pifidianana ofisialy ny HCC anio
Anio Talata 8 janoary 2019, amin’ny 3 ora tolakandro, no hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) ny voka-pifidianana ofisialy amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahina tamin’ny 19 desambra 2018.